Manners Whisky - Ngifonele Old Fashioned, kodwa .... | Irish Whiskey .com
Manners Whisky – Ngifonele Old Fashioned, kodwa….
Umhlahlandlela elula imikhuba emihle Wabasaqalayo.
Manners Whisky – Ngifonele Old usuphelelwe, kodwa ke ngilokhu ngisaya fan of imikhuba emihle, ngezilokotho nabadala usuphelelwe ukufaneleka ezivamile.
Kuye kwaba isikhathi eside kusukela I lokugcina ihlangabezane yokuntuleka imikhuba nangokuhlonipheka ezivamile ezivela inkampani nogologo Irish, kodwa omunye distillery linesikhathi eside likhona zikufakazela kimi enyangeni edlule noma kangangokuthi ayisekho inkampani Sekuyisikhathi eside ngangikuthanda futhi ihlonishwe.
Ngenjwayelo, Enginakho umthetho lapho nogologo ibhulogi ukuzama njalo nokubhala ezinhle, whiskey omuhle izindaba zezindaba.
Yilokho abantu othanda ukufunda ngazo. Uma engihlela kube iholidi ngaphambi kokuba endaweni ethile Angikaze ngiye ngaphambi, kodwa lapho Nginomngane kusukela, Angazi ukubabiza ukubuza lapho zokudlela ezimbi noma emabhishi aziwona, Mina uyicele tell me about kwabahle.
Ngenxa Blogger whiskey, Kuvame ukuba kube yimi lucky ngokwanele ukumenywa ukunambitha futhi abukeze nogologo izinkulumo ezintsha futhi uvakashele nakho ezintsha nogologo phambi nomphakathi jikelele. Uma Nginentshiseko, Mina kubhale. Noma ngingesiye umxhwele, Angithembi.
Sonny Molloys Galway ukukhetha Irish Whiskey Inqola Imiklomelo 2017 Irish Whiskey Imiklomelo. futhi yebo, Engiwanike ngabo!
Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, whiskey ibhulogi azikhulumi nje kuphela ngezinhlu nogologo amabhodlela khulula futhi reception ubusuku ngabunye senza yezikebhe mega. Kuyinto ngokuvamile ukuphishekela ukuthi kuyabiza ngesikhathi siqu; kucwaninga nekuhlelembisa ngokubhala izibuyekezo futhi izihloko futhi imali; ukuhamba ngezindleko siqu for ukulala eDublin, Cork nezinye amakhona Ireland ukuze khona kwethulwa futhi izindaba imicimbi. Kungase kukumangaze abaningi ukuba bafunde ukuthi iningi nogologo Blogger’ Ukubuyekezwa ku-brand kanye amabhodlela eziye bathenga futhi kukhokhelwe ngokwabo ngendlela ezejwayelekile ilayisensi yendawo off noma isikhumulo sezindiza iimfesi esitolo sabo.
Ngesonto eledlule isibonelo, Ngathatha usuku off, waxosha yonkana Ireland ukuze khona lokho mina kubhekwa abalulekile Irish Whiskey umcimbi e Dublin. Ngajabula ukwenza kanjalo, ngendlela fan ezemidlalo uyokujabulela zima eDublin khona emdlalweni ebalulekile I Aviva noma Croke Park. Ngesikhathi elapho, Ngahlangana eziningi nezinye Irish Whiskey Blogger futhi tweeters ababephakathi akujabulela ukunikela ngakho ngesihle ngesikhathi sabo siqu kanye nezinsiza ukuze sisekele Irish Whiskey wemboni. Abaningi Irish Whiskey brand, ikakhulukazi leyo amancane naphakathi ukhuthaze, futhi siyakuhlonipha umsebenzi lemizamo Irish Whiskey Blogger emzaneni wakithi omncane nabasafunda. Inhlonipho evulekile, zokuxhumana friendly kuyinsakavukela.
Njengoba ngasho, Ngivame kuphela bhala "Izindaba Ezinhle" izindaba. Uma Angazi ikakhulukazi uthanda noma ukusekela umkhiqizo, brand noma inkampani, Angininiki ngabo, Angive ngingathandi ubhale ngawo. Njengoba Odokotela bathi kwi-career abo, Okokuqala, singazilimazi.
Ngilobela okulula nogologo ibhulogi, hhayi-New York Times! Njengoba i "Blogger" amateur, Ngingu babazi kahle ukuthi engikwenzayo for fun, kufanele nanini siyekethise omunye umsebenzi onzima futhi yokuziphilisa. Wamaphoyisa embonini nogologo is indima neziphathimandla zokulawula, hhayi nogologo Blogger futhi ikakhulukazi hhayi ezincane kakhulu, kodwa esizweni esincane vocal ka ozibekile amalangabi isibani bese iphimbo ekuphambukeni “Whisky Amaphoyisa” Ama-Blogger muva ukuthi uvele blogosphere.
kodwa namuhla, Ngibheka ukubukwa ami njengengelosi umthengi abavamile, siqala ukuba kube khona isiteshi evulekile lokuveza Ngadumala ngokusebenzisa.
Inkampani e Umbuzo wawuwukuthi ilebula ukuthi waqala umsebenzi wami wokuba nogologo aficionado phezu 30 iminyaka edlule; Okokuqala Nokho uthando Ubaba wami we sha bese kusuka neminyaka yokukhula kwami, okuthunyelwe ekolishi omdala esahlala futhi esebenza e Donegal naseNyakatho Ireland.
Sekube kaningana indawo yami ezithambile nabo blogs zami imicabango zokuxhumana kuyo yonke le minyaka; asanda kokuthunyelwe okuyinto ebaluliwe siqu nakho Ngisemusha nogologo e Donegal.
Angikwazi ngenjabulo athi (njengoba Blogger whiskey) angikaze ngiye wafuna noma wamukela kakhulu ngendlela isampula miniature yokunambitha noma Biro ukhululekile kulesi inkampani ngaphezu kwezinsuku zokugcina 30 iminyaka. Ngalinye iconsi kagavini yabo Ndizuze futhi sipped e nogologo wami ngafundisa zonke ukuvakashelwa Ngenzé ukuba distillery zabo kuyo yonke le minyaka ubelokhu kukhokhelwe ngokugcwele njengoba aficionado abaqotho kanye nomdlandla.
Ngakho, namuhla, Angikhulumi sakhiwo sekubhala njengesisekelo Blogger whiskey. Ngibhala njengomuntu ikhasimende ekhungathekile futhi edumele ongowabo ababenze damnedest yakhe oda uzithengele amabhodlela ambalwa, njengoba izipho, ka omunye imikhiqizo yabo zabo ezibizayo futhi ekhethekile ngesikhathi kumaviki ambalwa wokugcina.
Kabili ngonyaka, njalo ngonyaka (March nango-August) zokugcina koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu, lapho ekhaya e-Ireland, Ngenzé uhambo bendabuko phansi ekhaya ukuze West Cork nge ibhodlela into enhle noma engajwayelekile kusuka esitebeleni sabo ukugubha umndeni iminyaka engu-abalulekile nobaba wami. Kuyinto isiko lomkhaya.
Mashi 18 – Ekupheleni 30 Unyaka Nesiko eside.
Ngeshwa (noma mhlawumbe hhayi!), Agasti kulo nyaka waba unyaka lapho thina ngokungathandi bashintshele i brand okunye.
yabo “yezenhlalakahle” abezindaba ithimba baye basebenza kanzima ngempela ukuze nobabili fan of engamashumi amathathu plus futhi ikhasimende abaqotho, esibatshela angibhalele lesi sihloko.
Ngingahle ubudala usuphelelwe, kodwa imikhuba emihle nangokuhlonipheka ezivamile sizohlala Ukulunywa trump umsindo, memes futhi cocktail fancy kuze kufike lesi umthengi nogologo ukhathazeke.
Abanye, kodwa akuzona zonke brand nogologo esizithandayo nangenhlonipho. Kuyinto indlela yethu kancane ethi. “Siyakuthanda umsebenzi wakho!”.
Kodwa mina, akufanele simangale. Ukuvakashela Irish Whiskey esidayisa ezinkulu okudayisa kuleli sonto, Ngaqaphela futhi waphawula ukuthi ukuba khona ukubonisa lokhu brand kanye yisakhiwo sodumo manje uma kuqhathaniswa nakho lokho wasebenzisa ukuba ezine nje noma eminyakeni emihlanu edlule. Umbono wami siqu ukuthi lokhu kuncipha kwesikhathi sokuphila edabukisayo akuyona unconnected nalokho Ngibhala mayelana namuhla. Awe njani amaqhawe ukuwa ngokushesha kangakanani kungase kwenzeke.
Epilogue (nge ukuxolisa ukuze Quinn Martin)
Bathi wokuthi akufanele neze uthumele i-imeyili noma ukushicilela isihloko ngenkathi acasuke. Yingakho ngilindé esingangesonto noma kanjalo ukushicilela le eyodwa okulotshiwe ngaphezulu ukudabuka kuka e kuyacasula. Ngicabangé njalo ukuthi uma obakhathalelayo umuntu noma umkhiqizo noma inkampani, kufanele sibazise, njengoba umngane, uma ucabanga isimo ababhekene okungalungile. Uma belalela, omkhulu. Uma bengakwenzi, kahle, okungenani ubungazama ukusiza. Ngokuzayo uhlale elayo ukukhetha.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, njengekhasimende whiskey, Ngithenge amabhodlela amabili okungaphezu kwe-avareji amanani kagavini Irish kusuka ezimbili ezihlukene Irish nogologo Distilleries (hhayi distillery okukhulunywe ngayo esihlokweni ngenhla) okuyinto wahlushwa corks ezilimele futhi omunye udaba oluhlobene izinga.
Njengoba i umthengi abavamile, Ngabuza ngokuhlakanipha baxhumane ngamunye izinkampani ezimbili by Private “Umlayezo okuqondile” on Twitter enika zibayise buthule ngalokho okwakwenzekile, eqinisekisa ukuthi zonke esihle eceleni kwami, kodwa kungase kube inkinga ngabo ukubheka.
Omunye distillery ukufunda indiva amakhono ami. Enye distillery, ngokushesha waxhumana nami
futhi wahlela ukuba ilungu lethimba ukuhlangana nami umuntu ngemva kwezinsuku ezimbalwa, lapho ngobuqotho walalela futhi baziswa impendulo yami ushintshanisiwe ibhodlela lami ngokwengxenye kudliwe engena esikhundleni ngokugcwele. Ngazi lapho brand ukuthi ngizobe ukuthenga futhi.
Ngabona futhi exchange zokuxhumana muva nje lapho umthengi kubhekwane empeleni esasisesisha Irish Whiskey brand mayelana udaba ukuphakheja elinganiselwe ukukhululwa Inkulumo. An impendulo ngokushesha futhi ngempumelelo kwalandela okuholela ikhasimende nakakhulu. Iningi Irish Whiskey brand abanothando linakekela kokubili umkhiqizo wabo kanye namakhasimende. Inkinga iba amabili noma amathathu brand emikhulu abenza ukukhohlwa kwabo okudlule beyofuna iDemo term nzuzo share emakethe futhi inzuzo. Sha owaphefumulela lesi sihloko kakade bewa. Abanye bangase ulandele ngokushesha kunalokho abakucabangayo.
Kuvele Irish Whisky noma ngisho Whisky Tiger. Kungaba zonke zingahambi kahle kangaka okusheshayo.
Nginilobele ngaphambi kokuthi ungazivikela kanjani idumela wenarha namagugu wenarha Irish Whiskey nezingozi ezibangelwa i-Irish Whiskey Tiger noma Irish Whiskey Bubble. Sales ukusebenza amafayela lobuchwepheshe konke kubaluleke kakhulu, kodwa ukuze Ukuhlonipha Irish Whiskey Umthengi kanye ifa Whisky Irish.
Usongo olukhulu idumela Irish Whiskey kungase kahle kusuka idlanzana ukumaketha ashisayo-Kudutshulwe zokuxhumana ochwepheshe entsha nezazi konke yokuthengisa amamethrikhi kodwa abazi kancane futhi anakekele kancane mayelana namakhasimende awo futhi umkhiqizo emangalisayo okhokhela inkokhelo yabo.
Marketing kubiza imali, kodwa Imikhuba Emihle futhi Common ukufaneleka abiza lutho futhi ngokuvamile enamandla kakhulu ukuxhumana amathuluzi.